ग्लोबल आइएमई बैंक बेलायतमा :: कमल नेपाल :: Setopati
ग्लोबल आइएमई बैंक बेलायतमा
बेलायत, माघ ८
ग्लोबल आइएमई बैंकले संयुक्त अधिराज्य बेलायतकोे एल्डरसर्ट ह्याम्पसायरमा सम्पर्क कार्यालय संचालन गरेको छ।
सो सम्पर्क कार्यालयको एक समारोहका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपालले उद्घाटन गरे। वाणिज्य बैंकहरुमा पहिलोपटक ग्लोबल आइएमईले संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सफल भएकोमा गभर्नर नेपालले बधाई दिए।
सोही कार्यक्रममा बेलायतका लागि नेपाली राजदुत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीले देशभित्र मात्र नभएर बाहिर समेत प्रदान गरिरहेका सेवा सुविधाको प्रशंशा गरे। बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक बिकासमा यो कार्यालयले टेवा पुर्याउने बताए। देशभित्र ७ वटै प्रदेशमा आफ्नो सेवा विस्तार गरिसेकेको बताउँदै उनले विदेशमा पनि शाखा कार्यालय विस्तारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपालमा लागानीको लागि प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेकोले बेलायतस्थित व्यवसाथीहरुलाई आग्रह समेत गरे। यो सम्पर्क कार्यालयबाट काम तथा पढाईको सिलसिलामा बेलायत पुगेका नेपालीहरुलाई रेमिट्यान्स पठाउन तथा बैंकिङ कारोबारमा सहजता हुने छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले यसअघि अष्टेलियाको सिड्नी तथा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पर्क कार्यालय खोलिसकेको छ। यि आगामी दिनमा अन्य देशमा पनि कार्यालय खोल्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए।
११३ वटा शाखा, १२७ एटिएम, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टरबाट बैंकले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। बैंकले हाल कोरिया र भारतबाट नेपालमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रयाउन सफल भएको छ। त्यसैगरि मलेसिया, कतार, युएई, बहराइन लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ८, २०७४, ०६:५२:२७